ORCHID PAPIOPEDILUM: SHARAXAADDA UBAXA, TALOOYIN KU SAABSAN DARYEELKA GURIGA, SIFOOYINKA DAGAALKA KA DHANKA AH CUDURRADA IYO CAYAYAANKA, IYO SIDOO KALE SAWIR GEEDKA - SOOSAARKA DALAGGA
Kusoo dhawow papiopedilum orchid - qaababka daryeelka guriga iyo sawir ubax
Pafiopedilum waa nooc qurux badan oo u eg oo orchid ah, taas oo inta badan loo yaqaan "dharbaaxada gabadha". Dhirta Tani waxay ku raaxeeystaa noocyo kala duwan oo kala duwan, kuwaas oo ku kala duwan muuqaalka ubaxa iyo caleemaha. Qurxinta quruxda badan waxay ka imanaysaa Koonfurta Aasiya.
Waa suurtogal in la koro kabo ma aha oo keliya aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale guriga, haddii aad si habboon u wajahdo arrintan oo u bixiso xaalado cimilo qoto dheer. Pafiopedilum waxay noqon doontaa quruxda akhlaaqda ee gurigaaga.
Pafiopedilum waa warshad ka mid ah dhirta qoyan ee qadiimiga ah, qoyska waa orchids. Waddanka midabkiisu waa:
Kabaha laydhka ah waxaa badanaa la gooyaa beeraha botanical sababo la xiriira dhibaatooyinka abuuraya xaaladaha lagama maarmaanka ah iyo taranka, laakiin Beelaha bred laga yareeyo waxay u oggolaanayaan inay kobciyaan dhaqankan ee guri iyo guri.
Xiiso leh Cimiladu waxay u dhowdahay cirifka ama shuban-biyoodka ayaa lagama maarmaan u ah kobaca raaxada leh ee Pafiopedilumu (roobab culus xagaaga iyo goosadka qalalan)
In papiopedilum, nidaamka xididka waxaa si taxadar leh loo horumariyey, wax yar ka yar yahay, wuxuu leeyahay midab madow, iyo asliga ah waa gaaban. Saxarada caleenta ee qaabab kala duwan, maadaama noocyada orchid ay tahay arrin go'aamiya. Waxaad arki kartaa caleemaha ballaaran ama midab leh.
Midabka saxanka xaashida waxuu ka duwan yahay: wuxuu noqon karaa mid midab-doorsoon ama wuxuu yeelan karaa habka marmar xiiso leh. Dhererka caleen waa 50-60 cm, peduncadu wuxuu gaaraa dherer 5-55 cm Dhammaan noocyada inflorescences waa isku midabka midabka iyo qaabka. Hal mar ayaa abuuri kara ilaa 30 ubax.
Ubaxyadu waxay yihiin kuwo ballaadhan, oo leh qaab caan ah. Midabku wuxuu noqon karaa sida soo socota:
Qaybta sare ee korantada ayaa kor loo qaadayo, waa mid ballaaran oo dhalaalaya, halka iftiinka la duuduubay. Tani waxay ka hortagtaa in biyaha aysan galin xilliga roobka ama biyaha. Kabuubku wuxuu u eg yahay kabo qurxoon, sidaas darteed Orchid oo helay magacyo dhowr ah:
Waxaad arki doontaa sawirka ubax:
Qeybinta paphiopedilum ee caan gooni ah ayaa dhacday qarnigii 19aad. Markii ugu horeysay ee 1819 oo India ah, sayniska deenishka Nathaniel Wallich ayaa markii ugu horaysay dunida siinayay qurux badan oo qurxoon. Sanadkaas wuxuu orchid bilaabay inuu ku faafo Yurub oo dhan. Qarnigii 19aad, ubaxyadan cajiibka ah waxaa lagu xannibay xannaanadda England ee ku taal aqalka boqortooyada.
Waa maxay isbeddelka noocyada dhirta kale?
Farqiga ugu weyn ee Pafiopedilum ee noocyada kale ee orchids waa in ubaxa uu soo bandhigo xaaladaha dayactirka: heerkulka, qoyaanka, qoyaanka. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad sheegto waqtiga iibka warshad laga helo takhasusle. Muuqaalka xiga ee ubaxa waa ka dib markii ubaxyada caleemaha aan hoos u dhicin, sidaa darteed sanadka oo dhan geedka waxuu jecel yahay muuqaalkiisa soo jiidashada leh, laakiin halkii cagaar cad.
Noocyada caan ah ee soo socda ee papiopedilum ayaa lagu kala saari karaa:
Appleton. Warshadani waxay ku kala duwan yihiin ubaxyo waaweyn iyo kuwo ballaadhan, oo ah dhexdhexaadinta oo ah 10 cm. Ubax ayaa dhacaya guga, iyo in la kordhiyo muddadaas waa lagama maarmaan in la helo dhaqanka si taxadar leh. Midabka ubaxa waa mid huruud ah, oo caleentuna waa cagaaran-guduudan, wuxuu leeyahay caraf udgoon. Qaabka Marble waxaa lagu kala firdhiyaa dusha saxanka warqadda. Cufnaanta caleemaha way adagtahay, talooyinkooduna way yar yihiin.
Wonderful. Ximaaladu waxay weli yihiin meesha lagu magacaabo nooca pafiopedilum. Ubaxii waa mid aad u jilicsan oo cagaar ah, waxaadna daawan kartaa quruxooda quruxda badan xilliga dayrta iyo dhammaan jiilaalka. Marka koraan dhirta ay u baahan yihiin inay ku siiyaan qabow. Saxanka caleen ilaa 30 cm dheer, peduncle - dhexdhexaad ah.
Baraf cad Orchid Tani waa mid aad u jilicsan, iyo marka ay koraan waxay qaadan doontaa badan oo iftiin iyo kulayl. Inta lagu jiro ubaxyo ubax caddaan ah ayaa la ogaan karaa, dusha sare ee dhibco mugdi ah kala firdhaan. Iyadoo mid ka mid ah peduncle, 20 cm dheer, waxaad heli kartaa 1-2 ubax udgoon, oo leh dhexroor ah 8cm. Saxanka caleen waa dheer, iyo qaababka marble ayaa ku yaalla dusha sare.
Muddada ubaxu waa 3 bilood, laakiin xitaa ka dib, dhirta ayaa muujin doonta caleenta caleenta ah.
Sida loo daryeelo ka hor iyo ka dib ubax?
Qoyaantan ayaa si xun u dhaqaajisa dhaqaaqa. Just ka hor inta ubax iyo ka hor formation formation of burooyinkeeda, ma aad u dhaqaajin kartaa dheriga leh pafiopedilumom . Tan iyo markii ay dhibto ubaxa, asliga ah iyo caleemaha ayaa laga yaabaa in la bedelo.
Geedku wuxuu jecel yahay iftiin badan, gaar ahaan xilliga ubaxyada. Sidoo kale, ma noqon kartaa repot ubax, sababtoo ah cadaadiska, ubax ma dhici karto dhan. Marka ottsvetet orchid, iyo peduncle u engegan, ka dibna waa in la gooyaa si xoog leh saldhigga.
Maxaa dhacaya haddii aysan jirin burooyinkooda?
Si aad ubaxdo, uma ogolaan kartid heerkulka heerkulka. Waxa kale oo muhiim ah in la ilaaliyo qiyaasaha qoyaanka, bacriminta iyo biyaha waqtigooda, iyo fitolamps jiilaalka.
Waa muhiim! Isla markiiba ka hor ubax, iyo sidoo kale inta lagu jiro waqtiga aadan u guuri karin ama dhaqaajin karin dheriga.
Haddii aad ku koraan ubax guri dabaq ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku rido meel gees ah, halkaas oo aysan jirin wax qorshe ah iyo hooskii qayb ahaan.
Diyaarinta ciidda iyo dheriga
Kabaha Venus, waxaad u baahan tahay inaad doorato substrate ah oo awood u leh inuu hayo qoyaanka. Waa inay ku jiraan qaybaha soo socda:
Carrabku waa inuu noqdaa iftiin iyo qalafsanaan. Sida dheriga, waxaa ka wanaagsan in la doorto ballaaran oo qotodheer, iyo ugu muhiimsan oo hufan, si loo ilaaliyo horumarinta nidaamka xididka.
Wixii ah pafiopedilum, heerkulka xagaaga heerkulka wanaagsan ayaa weli ah 23-28 digrii, iyo jiilaalka tirooyinkaas waa inay noqdaan 18-23 digrii. Haddii aad ku korto noocyo qabow u adkaysta ee pafiopedilum leh caleemo ballaaran oo mugdi ah, markaa heerkulka ayaa ka wanaagsan inuu hoos u dhigo 2-3 digrii. Isla xilligaa habeenkii tilmaamayaasha heerkulka waa inay ahaadaan 3-5 digrii oo ka hooseeya maalinta.
Wixii orchids qoyaanka pafiopedilumoptimal ayaa weli ah 70-80%. Laakiin si loo fuliyo buufin aan lagula talin. Si kor loogu qaado qoyaanka qolka, waa in aad isticmaashaa qoyaanka ama weelasha meel biyo ku dhow dhirta.
Pafiopedilum - warshad iftiin leh. Way ka fiican tahay inaad ku korto daaqadaha jihada galbeed ama bariga. Maalin kaliya, marka qorraxda iftiinka qorraxda la joogo, waa inaad ka fekertaa shoogga. Muddada saacadaha iftiinka ee orchids waa 12-13 saacadood.
Pafiopedilum waa dhaqanka qoyaanka u adkaysta, markaa uma dulqaadan karo qalajinta ciidda, laakiin qulqulista ayaa si xun u saameyn karta xaaladda geedka. Marka orchid uu galo marxaladda koritaanka firfircoon, waxaa muhiim u ah in ay bixiso dheecaanka ugu sareeya, iyo dhammaadka biyo kululaynta waa in la dhimo.
Si aad u waraabiso waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho biyo nadiif ah. Marka qoynta, iska ilaali taabashada dareeraha ee caleemaha iyo meesha. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo habka waraabinta, taas oo dheriga la dhigo digsi biyo.
Bacriminta for orchids in ay sameeyaan hal mar bishii, iyo inta lagu jiro ubax si ay u fuliyaan this manipulation 2 jeer bishii. Waxaad isticmaali kartaa Bacriminta macdanta gaarka ah, laakiin inta ay ku qoran tahay tilmaamaha waa in la yareeyo 2 jeer. Pafiopedilum uma dulqaadan karo cusbada xad dhaafka ah ee ciidda. Si looga hortago tan, waxaad u baahan tahay inaad waraabiso warshad biyo leh, iyo marka xigta ee aad ku darto Bacriminta macdanta.
Haddii ciidda ay si culus u faddaroobeen oo la gooyey, ka dibna way fiicantahay in la cusboonaysiiyo. Waxaa lagugula talinayaa in cuncunka isdaba-marinta ee noocaan ah 7-8 bilood kasta. Ka dhig in ay ka fiican guga, oo dhan si taxadar leh oo taxaddar leh, si aanay u waxyeeleeyaan xididada. Hannaanka:
Biyaha warshadda maalinta ka horeysa habka.
Ka saar ubax si tartiib ah, si aanay u waxyeeleynin xididada. Waxaad ku dhaqi kartaa biyo iyaga oo sug in aad qalajiso.
Dib u dhig dhirta dheriga cusub iyo ciidda.
Qalitaanka ka dib, ha u waraabin ubax 3-4 maalmood.
Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo orchid ee noocan ah habka loo kala qaybiyo baadiyaha inta lagu guda jiro qaliin. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in laga tago 3 saliida leh xididada delenka kasta. Ka dib markii dhirta ay caadaysteen, ha u cabin 2 wiig. Hore, heerkulka hawadu waa inuusan ka badnayn 22 digrii.
Digniin! Haddii tirada rosettes xidid ka yar tahay saddex, papiopedilum qaadan doonaa waqti dheer si ay u qaataan xididka, iyo ubax ma dhici doonto.
Ka mid ah cayayaanka, khatarta ah ee papiopedilum waa:
Kiniiniyadani waxay u geystaan ​​waxyeelo weyn oo ku yimaada saxanka caleenka ah, afkoda iyo peduncles, markay nuugaan juuska. Natiijo ahaan, orchid waxaa lagu daboolaa dhar dhuxul leh. Daadinta Fitoverm, oo la qaadaa toddobaadkii hal mar, ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso shayada cayayaanka.
Cudurada ugu waaweyn ee orchid waa qudhuun iyo fungi. Kuwani waa cudurada xididka iyo salka. Tani waxay dhacdaa iyadoo wareegga hawada ee hawada, qoyaan badan iyo qoyaan. Badbaadi xaalada waa sulfate copper.
Dhirta noocan oo kale ah waxay la mid yihiin pafiopedilum:
Iris Iris. Noocyadaasi waxay u eg yihiin qaab ubax ah. Wuxuu ujoogaa xayawaanka yaryar oo u muuqda mid gaajo yar.
Cumbria Dhaqankan wuxuu leeyahay ubaxyo, dhirta ay sidoo kale la daboolay dhibco mugdi ah, iyo daboolka sare ayaa horay loo sii daayay, sida pafiopedilum.
Qodobo badan oo ubax ah. Warshadkan waxaa loo dooran karaa guriga iyo beerta labadaba. Waxay leedahay ubaxyo lilac waxtar leh iyo caleemo cagaaran iftiin leh.
Kareebeeye leh. Dhaqanka, caleemuhu waxay u egyihiin sida orchid - ballaaran iyo qaab elektaroon ah, oo xitaa la gooyey. Burooyinka waa qaab isku mid ah sida papiopedilum, midabkoodu wuxuu noqon karaa casaan ama guduud.
Grammatofillium. Warshadu waxay leedahay ubaxyo jaale ah oo muuqda leh dhibco bunni ah.
Pafiopedilum waa dhir aad u xiiso badan oo qurux badan oo qurxoon oo si firfircoon u jilciya beeraha beeraha, laakiin sidoo kale guryo. Oo ha u daryeelo dhaqanka waa in ay ahaato mid joogto ah oo joogto ah, quruxda muuqaalkeeda, ma ka tagi doonaa indho la'aan ah wax kasta oo beeraha.